Ukusajingijolo kukhula | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ukusajingijolo kukhula
I-peas eluhlaza iwusizo kanjani, zingaki ama-kilojoule akuyo, nokuthi yini ehlanganisiwe
I-pea ingenye yezinambuzane zasendulo ezalinywa yisintu. Enye yezinhlobonhlobo ezithandeka kakhulu zasehlobo zasentwasahlobo-ehlobo ezinganeni kanye nabantu abadala kukhona ama-peas asemnandi, amnandi futhi ahlanzekile, asuka ensimini, ngakho-ke kuyasiza ukuthola ukuthi yini enye le mithi engasithokozisa yona, ngaphandle kokunambitha okuhle.
Indlela yokunakekela ama-raspberries, imithetho yokutshala izitshalo
Enye yezitshalo ezizithandayo kakhulu zomlimi wensimu yi-okusajingijolo. Izwe elingavamile ngaphandle kwesihlahla sama-raspberry esisodwa noma izinhlobo eziningi. Kulesi sihloko sizochaza ukuthi singakhula kanjani futhi sinakekele ama-raspberries ahlasele. Indlela yokuphuza ama-raspberries, nokuthi ngabe kufanele yini kwenziwe Enye yezimfihlo eziyinhloko zama-raspberries ezikhulayo zalezi zinhlobo yiyona ndlela efanele yokunisela.
Hercules okusajingijolo: incazelo ehlukahlukene, ukutshala nokulima
Hercules okusajingijolo - umsebenzi we-horticultural art. Iphupho lomlimi wensimbi ligcwaliseka - amajikijolo amakhulu abomvu-ruby, amahlumela omnyaka wokutshala, isivuno esihlaba umxhwele, ngisho namaqhwa, nakho konke lokhu ngaphandle kwezinkinga ezikhethekile nokukhathazeka. Uyazi? Ubungqayizivele be-remontant (kusuka ku-Fr. Remontant - ukuvuka, ukuqhuma kabusha) ama-raspberries - ukuthela izithelo kabili ngonyaka.
Amamaki okusajingijolo aphuzi aphezulu: yini okufanele ukhethe ekutshalweni kusayithi
Okusajingijolo okuphuzi - enye yezitshalo ezingavamile kakhulu, ezingavamile ukutholakala ensimini yasekhaya. Futhi akusizi ngalutho, kusukela lapho usukhulile le berry, kakade akunakwenzeka ukuwenqaba. I-raspberry ephuzi inezinzuzo ezimbalwa phezu kwezinhlobo ezibomvu nezinnyama. Ngenxa yokuqukethwe okuphansi kwe-anthocyanins (amamese), akubanga ukwelashwa kwezingane ezincane futhi kufanelekile kwabesifazane abakhulelwe.
Amathiphu aphezulu we-raspberries ekhulayo i-Hussar: incazelo ehlukahlukene, ukutshala nokukhathalela
I-Hussar iyinhlobo ehlukahlukene yokusajingijolo eyikhwalithi futhi engenakuzithokozisa eye yathola ukuqashelwa phakathi kwabalimi abaningi. Ngisho nokunakekelwa okuncane okuncane ukuletha izivuno eziphezulu. Ama-rashijibusi ama-Hussar amajikijolo ayinkulu, aqhakazile, anomuncu-amnandi futhi anomnandi kakhulu. Masiqhubekele ekuchazeni umlimi we-raspberry Gusar, kanye nokufunda ngezici zokutshala nokunakekela lesi sitshalo.
Izici zokutshala okusajingijolo "i-Caramel": izinhlobo zezici, ukutshala nokunakekelwa
Ama-novelties e-Varietal njalo adonsela phambili. Ama-sweet, amajikijolo amakhulu, amahlumela, athela izithelo phakathi nesikhathi sonke akuzona zonke izinzuzo zezinhlobo ezintsha. Enye yale mikhiqizo emisha yi-raspberry "i-Caramel". Kubonakala kungekudala, ngo-2013, futhi abanikazi balezi zinhlobonhlobo baneliseke ngokuvuna kokuqala.
Konke okudingayo ukwazi ukukhulisa ama-raspberries asemnyama
Abaningi bajwayele ukubona kuphela ama-raspberries abomvu noma abomvu kuphela, futhi kuphela ingxenye encane yamafama eyazi ukuthi kukhona ama-raspberries amnyama nephuzi. Lokhu kuyilungelo elikhulu lokumhlangabeza emasimini ethu. Lesi sihloko sigxile ezihlukahlukene zokusajingijolo ezihlukahlukene ze-Yellow Giant. Ngenxa yenani elincanyana le-anthocyanin dyes, lifanele ukusetshenziswa izingane ezincane, izifo ezikhulayo kanye nabesifazane abakhulelwe.
Incazelo yezinhlobo eziyinhloko zokusajingijolo ezimnyama
Sekuyisikhathi eside i-Raspberries ihlonishwa yizakhamuzi zasehlobo. Engxenyeni engadini ungase uhlangabezane nokusajingijolo omnyama okuyingqayizivele. Lesi sitshalo siletha ukuvunwa okunengi, kusiza ngemikhuhlane, nezinhlobonhlobo ezihlukahlukeneko zokusajingijolo ezimnyama zihlukileko okuthakazelisayo nombala wamajikijolo. Okusajingijolo okumnyama kubizwa ngokuthi i-blackberry-like. Ungowomndeni wase Rosaceae futhi weza kithi evela eNyakatho Melika.
Okudingayo ukwazi ngokutshala nokunakekela isihlahla sokusajingijolo iTarusa
Okusajingijolo okumnandi akushiyi muntu ongenandaba. Ikakhulu uma ibukeka njengomuthi. Kunoma iyiphi ingadi ungabona izinhlobo ezahlukene amajikijolo. Izihlahla ezithandwa kakhulu okwamanje zibhekwa njengesibhakabhaka somuthi iTarusa. Kulesi sihloko uzofunda ukutshala ngokucophelela lezi zinhlobonhlobo zama raspberries.
I-Raspberry "Cumberland": izici ze-agrotechnology ezihlukahlukene nokulima
Ngokumelene nesimiso semifino ejwayelekile ebomvu okusajingijolo, inguqulo yayo emnyama ibonakala ingavamile, ngoba kubuhlungu kakhulu ezindaweni ezingasemakhaya. Yini engingayisho, ngisho nalapho kuthengiswa akunakwenzeka ngaso sonke isikhathi ukuthola izithombo zokusajingijolo ezimnyama "i-Cumberland", yingakho abantu abambalwa abakhathalela ngokutshala nokukhathalela.
Indlela yokutshala izithelo ezinkulu zokusajingijolo "I-Atlant"
Ukulungisa izinhlobo zokusajingijolo zivame kakhulu phakathi kwabalimi namuhla. I-Raspberry "I-Atlant" ifanelwe ukuqashelwa okukhethekile ngenxa yokuphikisana kwayo nezifo, futhi kulesi sihloko uzothola incazelo yezinhlobonhlobo, izithombe nemithetho yokunakekelwa. Izici eziphilayo zezinhlobonhlobo Ukuze uhlolisise lezi zinhlobonhlobo zokusajingijolo, okokuqala sizocubungula izici zalo eziphilayo nokubukeka.
I-Raspberry Polka: incazelo nokulimala amajikijolo amakhulu-fruited
Kunzima ukuthola umuntu ohlala ehlobo, endaweni okungahle ikhule ngayo okusajingijolo okumnandi nokumnandi. Kanye nama-currants, ama-strawberries nezinye izitshalo eziwusizo, kudinga ukuziqhenya kwendawo cishe engadini. Namuhla, kunezinhlobonhlobo zezitshalo ezingaphezu kwezingu-120, kodwa abantu abaningi banesithakazelo kuphela emahlathini amakhulu namajikijolo amakhulu.
Indlela yokutshala ama-raspberries ekwindla
Izihlahla zokusajingijolo ziyakhanga kakhulu kumgadi wensimu, hhayi kuphela ngoba zikwazi ukuthela izithelo, kodwa futhi ngokuphathelene nemisebenzi yazo yokuhlobisa. Etshalwe ngemuva kwendonga noma amaqembu okutshala ama-raspberries anezithelo ezimibalabala kuzokwenza kube nomculo omuhle kakhulu wokubukeka kweberry.
Indlela yokunciphisa ama-raspberries
Labo abakholelwa ukuthi emahlathini amancane ama-raspberry amajikijolo avuthwa ngaphezulu kunamahlathi aqokiwe, aphutha kakhulu. Uma siqhathanisa isihlahla esiseduze futhi sihlahlawe, sizobona ngokushesha ukuthi izithelo zivuthiwe kakhulu phakathi kwamahlamvu amaningi, futhi izimfanelo zokunambitheka kahle nakakhulu kulawo majikijolo akhula ehlathini olulodwa.
Siyakhula izinhlobo zokusajingijolo "Kirzhach"
Ama Raspberries izinhlobo Kirzhach sekuyisikhathi eside ekhulile on the dacha iziqephu abantu abaningi. Ahluke kwezinye izici zikaNkulunkulu, kodwa ngokuvunwa kwayo okujwayelekile, ukunakekelwa ngokucophelela nakho akudingeki. Ngakho-ke, lezi ezihlukahlukene zokusajingijolo zingenye yezithandwa kakhulu ezweni lethu.
Ukusajingijolo eCanada: incazelo nokuhlakulela ezihlukahlukene
Namuhla kunenqwaba yezinhlobo zokusajingijolo, phakathi kwazo okujwayelekile okuthandwa kakhulu. Muva nje, izinhlobo ezihlukahlukene zokusajingijolo zaseCanada, eziyimifanekiso evelele phakathi kwezinhlobonhlobo zeqembu, zivame ukutholakala eziqhingini ze-dacha. Esihlokweni sethu, sizokhipha incazelo yalezi zilwane futhi sichaze ukuthi singayinakekela kanjani.
Hlwanyela ama-raspberries Ukuziqhenya kweRussia ensimini yakhe
Sonke sithanda ukudla amajikijolo anomsoco, ayenamavithamini ehlobo. Enye yezinhlobo zokusajingijolo ezivame kakhulu nezintandokazi phakathi kwezihlali zasehlobo yi-Pride of Russia. Esihlokweni sethu sizokutshela ukuthi lezi zinhlobonhlobo nokuthi kanjani ukunakekela izihlahla. Humushela incazelo ku-isiZulu usebenzisa i-Google Translate?
Indlela yokutshala ama-raspberries entwasahlobo
Raspberries - amajikijolo anomnandi, anempepho futhi anempilo kakhulu. Mayelana naye wabeka izinkondlo nezingoma. Ngesikhathi esifanayo, lesi sitshalo asizithobeki, futhi ngisho ne-novice ingakhula i-shruub fruiting. I-raspberries yokutshala i-spring ibhekwa njengendlela ephumelela kakhulu futhi ekhiqizayo - ake sibheke ukuthi kungani. Imifula Masifunde lapho sihlwanyela ama-raspberries entwasahlobo.
Izisekelo zokunakekelwa okufanele ngama raspberries entwasahlobo
Okumnandi nokumnandi, okunomsoco nokuphilile, ukuphulukisa kanye nebhayisiki enjalo oyintandokazi - okusajingijolo. Kunzima ukucabanga ukuthi ayikho le berry e-dacha, ngoba ayidingi ukunakekelwa okukhudlwana, ngokunakekela kahle ama-raspberries entwasahlobo, kuyojabulisa ngokuvuna okukhulu. Ukutshala nokutshala izihlahla Izitshalo ngasinye zithanda ukubunjwa okunye kwendawo, inqwaba yokukhanya nomakhelwane.
Imithetho yokunakekelwa kwentwasahlobo nokudla ama-raspberries entwasahlobo
Yondla ama-raspberries entwasahlobo noma cha - lowo ngumbuzo. Ake sibone ukuthi yini ngempela intwasahlobo yokunakekela ama-raspberries, nokuthi yikuphi okudingekayo ukutshala ama-raspberries entwasahlobo ukuze ukwandise isivuno. Kuyini ukunakekelwa kwentwasahlobo? Ikhalenda ifike ekuqaleni kwentwasahlobo, okusho ukuthi sekuyisikhathi sokuqala ukusebenza kuma-raspberries.
Izici zokukhula sitrobheli okusajingijolo
Ingabe ufuna i-raspberry isihlahla esingavamile nesithelo esiphundu namaqabunga okuhlobisa afana ne-blackberry esakhiweni sakho? Le mix mixberry ibizwa ngokuthi okusajingijolo zaseTibetan. Namuhla, izakhamuzi zaseBaltic nasePoland ziyakwazi kahle, kuyilapho e-Ukraine lezi zinhlobo zisalokhu zingavamile. Ake sijwayelane naye maduzane!
Enye yezinhlobonhlobo ezithandwa kakhulu futhi ezikhiqizayo yi-apulasti e-Ostankino apula.
Kuphi lapho i-thrips ivela khona ezindlini zezindlu nokuthi ungayilahla kanjani?
Isitshalo esihlala njalo esitshalo esivela esihlahleni se-Asparagus noma seLyleinykh - Iglitsa (eRussicus)
Uhlu lwezindebe ezinezithombe nezincazelo
Izimfihlo kanye zokupheka kokwenza iwayini "u-Isabella" ekhaya
I-Broiler cross cross ROSS-708
I-Powdery isikhutha ku-phlox: ungahlukana kanjani